Umatshini ohambisa izixhobo zoMatshini waseTshayina oMatshini ohambisa izixhobo oMatshini
Ikhonkco lokuhambisa lixhotyiswe ngesango lokugcwala kunye nokutshintsha umda. Isango lokugcwala ligxunyekwe kwindawo yokugcina izilwanyana ukunqanda ukonakala kwezixhobo. Iphaneli yokunceda yokuqhushumba ibekwe kwicandelo eliyintloko lomatshini.
Isikhuseli sethu sokuhambisa sepremiyamu sikulungele ukuhambisa umgubo, igranular, i-lumpish, izinto ezicolekileyo nezirhabaxa ezifana namalahle, uthuthu, isamente, iinkozo, njalo njalo. Ubushushu obufanelekileyo bezinto kufuneka bube ngaphantsi kwe-180 ℃
Umatshini wokugaya umgubo we-TLSS uthotho lwe-tubular screw conveyor isetyenziselwa ukondla okuninzi kumgubo wokugaya kunye nokugaya ukutya.
Njengomatshini wokulungiselela ukutya okuziinkozo, lo matshini wokuhambisa usetyenziswe ngokubanzi kumzi-mveliso wokulungiselela ukutya okuziinkozo, isityalo samandla, amazibuko kunye nezinye izihlandlo zokudlulisa igranule, umgubo, izinto ezilahliweyo okanye izinto ezipakishiweyo, ezinjengokhozo, amalahle, umgodi, njalo njalo.
Ukuhanjiswa kwebhanti kusetyenziswa ngokubanzi kwiingqolowa, amalahle, umgodi, umzi-mveliso wombane, amazibuko kunye nezinye iinkalo.
Incwadana yokugaya oomatshini bokugaya kunye nesango lesilayidi somoya sisetyenziswa kakhulu kwizityalo zengqolowa kunye neoyile, indawo yokulungisa ukutya, isityalo sesamente kunye nesityalo semichiza.
Izinto ezinoxinano ezisezantsi ezikhutshiweyo